အမေရိကန်လူမျိုးတစ်ယောက်ရေးသားသည့် ရိုဟင်ဂျာအကြောင်း ဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့် နောက်ကြောင်းရာဇ၀င် အပိုင်း(၃) | မျိုးမြန်မာ
အမေရိကန်လူမျိုးတစ်ယောက်ရေးသားသည့် ရိုဟင်ဂျာအကြောင်း ဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့် နောက်ကြောင်းရာဇ၀င် အပိုင်း(၃)
Posted by myomyanmar on May 2, 2014
Posted in: ဘင်္ဂလီအရေး.	Tagged: Burma, Fake photos, Genocide, Jihad, Media Manipulation, Myanmar, Rohingya (ရိုဟင်ဂျာ).	Leaveacomment
အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ လစ်ဗျားနိုင်ငံတို့မှာရှိတဲ့ အယ်လ်ကေဒါနဲ့ တာလီဘန်တို့ရဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းများနဲ့ လက်နက်ကြီးများ အသုံးချသင်တန်း
များစွာသောရိုဟင်ဂျာများဟာစစ်ပွဲအတွင်း အာဖဂန်နစ္စတန်မှာဖမ်းမိနေခဲ့ကြတယ်။ ဒါမှမဟုတ်အကြမ်းဖက်သင်တန်းစခန်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတယ်။ နိုင်ငံများစွာမှ ထောက်လှန်းရေးအကူအညီများရဲ့ သတင်းပို့ချက်များအရ-
ရခိုင်မှ ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားအဖွဲ့အစည်း (အေအာရ်အန်အို)မှ အသင်းဝင်အယောက် (၉၀)ဟာ လစ်ဗျားနဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ ၂၀၀၁ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအတွင်း ကျင်းပတဲ့ ကြေးစားစစ်သည်သင်တန်း၊ ဖောက်ခွဲပစ္စည်း ကိုင်တွယ်မှုသင်တန်းနဲ့ လက်နက်ကြီးတွေကိုင်တွယ်မှုသင်တန်းတွေကို တက်ရောက်ဖို့ ရွေးခြယ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆို တယ်။၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ မေလမှာ “အေအာရ်အန်အို” အဖွဲ့အစည်းမှ အသင်းဝင်(၅)ယောက်ဟာ အယ်လ်ကေဒါကိုယ်စားလှယ် များနဲ့အတူအဆင့်မြင့်အရာရှိများ သင်တန်းကို တက်ရောက်ခဲ့တယ်။ သူတို့တွေဟာ စစ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ လက်နက်တွေနဲ့ငွေကြေးအထောက်အပံ့တွေကို အိုစမာဘင်လာဒင်က ထောက်ပံ့ပေးဖို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။မြောက်များစွာသော ဆက်သွယ်မှုများနဲ့ အထောက်အပံ့များကို ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ပါကစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေမှ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့များမှ ရရှိခဲ့တယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်။
လူတိုင်းက ဆိုးရွားစွာ ဆက်ဆံကြတာကို ခံနေရတဲ့ သနားစရာရိုးသားတည်ငြိမ်၊ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ သူတွေအဖြစ် သူတို့ကို အထင်မှားပြီးယုံကြည်လာအောင် ရိုဟင်ဂျာတို့က သတင်းမီဒီယာကို လှည့်စားခြင်း
အခုဆိုရင် မကြာသေးခင်က ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် ရက်စက်စွာ ပြုခံရပုံကို ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကိုစူးစမ်းတွေ့ရှိကြတဲ့ လူတွေဟာ ဆိုးရွားတဲ့အရာတွေကို ကြားခဲ့မြင်ခဲ့ဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် လူတော်တော်များများဟာ အခုချိန်မှာတော့ဒါတွေအားလုံးဟာ လိမ်လည်မှုတွေ၊ လှည့်ကွက်တွေနဲ့ လှည့်ဖြားထားတဲ့ အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သိမြင်လာကြခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီ ရိုဟင်ဂျာများရဲ့ အလောင်းများအဖြစ်ယူဆထားရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဟာတကယ်တော့ အင်ဒိုနီးရှားမှာကြီးမားလှတဲ့ ငလျင်လှုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ စူနာမီခေါ်ရေလှိုင်းကြီး ကျရောက်တုန်းက ရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအလောင်းတွေ အစုလိုက်အပုံလိုက်ကြီးရဲ့ဓာတ်ပုံကို ရခိုင်ပြည်နယ်မှာသေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအလောင်းတွေအဖြစ် လူတွေအထင်မှားအောင်ယူသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါထက်ပိုဆိုးပြီးကြောက်ရွံ့စရာစက်ဆုတ်စရာကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ နောက်ဓာတ်ပုံတွေက နိုင်ဂျီးရီးယမ်းမူဆလင်တွေက နိုင်ဂျီးရီးယမ်းခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကို သတ်ပြီးမီးပုံရှို့ထားတဲ့ ပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် Google မှာရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ကောက်ကျစ်စွာအသုံးချထားတဲ့ လှည့်ဖြားမှုတွေကို ကမ္ဘာအနှံ့မှာဘာသာစကားမျိုးစုံနဲ့ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။(Burma, Myanmar, Jihad, Genocide, Rohingya (ရိုဟင်ဂျာ), Fake photos, Media Manipulation) စသဖြင့် စတဲ့စလုံးတွေ သုံးပြီးရှာဖွေပါ။
ရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံသားခံယူခွင့် ဘာ့ကြောင့် မပေးသင့်သလဲ?
ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ တစ်သီးတစ်ခြားမျိုးနွယ်စုအသွင်နဲ့ နိုင်ငံသားပြုခွင့် လိုချင်ပေမဲ့ မူဆလင်မဟုတ်တဲ့ သူတွေစိုးမိုးအုပ်ချုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်ပါးလက်အောက်ခံအဖြစ် နေလိုကြတာမဟုတ်ဘူး။ သူတပါးနိုင်ငံထဲမှာ ကိုယ့်ထီး ကိုယ့်နန်းနဲ့ ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံငယ်အဖြစ်ခပ်ရင့်ရင့် ရပ်တည်ပြီးသာ နေချင်ကြတာပါ။သူတို့ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်က ရခိုင်လူမျိုး တွေလို ဇာတိမွေးရပ်မြေရဲ့ နက်ရှိုင်းလှတဲ့ သမိုင်းဇာစ်မြစ်တွေ၊ ရိုးရာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေလည်းမရှိကြပါဘူး။ သူတို့အဲဒီကိုသာရောက်နေတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ရိုးရာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအထောက်အထားပြစရာ လဲ မရှိပါဘူး။ ဒါတွေကို စိတ်ဝင်စားမှုလည်း တစ်စက်မျှ မရှိပါဘူး။ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ မတူတဲ့ အချက်တွေရှိတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ ရခိုင်တွေဟာ ဒီပြည်နယ်မှာ ကိုယ့်လူမျိုးတွေချည်းသာ သီးသန့်စစ်စစ်တည်ရှိနေရ မယ်ဆိုတဲ့ လူမျိုးရေးတယူသန်ဝါဒ မရှိကြဘူး။ ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတစ်မျိုးတည်းပေါ်မှာပဲ လွဲမှားစွာအယူသီးပြီး တခြားကိုးကွယ်ရာဘာသာကို ဘာသာရေးစစ်တိုက်ပစ်မယ်ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက်မျိုးလဲ လုံးဝ မရှိကြဘူး။ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ နိုင်ငံသားခံယူခွင့်ကိုသာ လိုချင်ကြပေမဲ့ သူတို့ဝန်းကျင်မှာ တခြားလူမျိုး၊ တခြားဘာသာဝင်တွေရှိနေတာကို မပျော်ရွှင်မရှုစိမ့်ကြဘူး။ တခြားလူမျိုးတွေ ရိုးရာဘာသာ သာသနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပွဲတော်တွေ ကျင်းပဆင်နွှဲကြတာကိုလည်း မနှစ်မြို့ကြဘူး။ရိုဟင်ဂျာတွေ နိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူချင်ကြတာက သူတို့အတွက်ကိုယ်ပိုင်မူဆလင်ပြည်နယ်အဖြစ် တောင်းဆိုဖို့ဖြစ်တယ်။အဲဒီပြည်နယ်ကလည်း မူဆလင်မဟုတ်သူတွေကို အမြန်ဆုံးတိုက်ခိုက်မောင်းထုတ်ပြီး ကျန်တဲ့သူတွေကို အမြန်ဆုံးသတ်ဖြတ်ပစ်လိုက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဒီနောက်တော့မူဆလင်ဘာသာမဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုသူတို့တတွေအတွက်လွတ်လပ်ရေးကြေငြာမှာဖြစ်တယ်။ တစ်နည်းပြောရရင် နောက်ဆုံးမှာတော့ သူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားပြုမှုပုံစံကို မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသား မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံသားပြုမှုလို့ မြင်ထားကြတယ်။အကယ်၍ရိုဟင်ဂျာတွေကိုသာ နိုင်ငံသားခံယူခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ကြီးမားလှတဲ့အန္တရာယ်ဆိုးကြီးဖြစ်လာဖို့၊လူတွေပိုပြီးသုတ်သင်သတ်ဖြတ်လာဖို့ ဦးတည်သွားမှာဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ရှိတဲ့ နေရာကို သန့်စင်စေဖို့ မူဆလင်မဟုတ်သူတွေကို မောင်းထုတ်ပစ်ဖို့ရယ်ကြွင်းကျန်နေတဲ့ မူဆလင်မဟုတ်သူတို့ရဲ့ သမိုင်းကို ဖျက်ဆီးဖျောက်ဖျက်ဖို့ရယ်ဟာ၊ မူဆလင်တို့ရဲ့ တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြလို့ဖြစ်တယ်။
အဲဒီကမူဆလင်တွေဟာ အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ သမိုင်းအထောက်အထားတိတိကျကျရှိခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူမျိုးတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုရော (ဥပမာ-မြောက်ဦး) လို ကမ္ဘာ့အဆင့် ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်ဒေသတွေကိုပါ ဖျက်ဆီးနေကြပါ တယ်။ရိုဟင်ဂျာတို့အတွက် မွေးဖွားလာခဲ့ရာမှ ဘ၀တလျှောက်မှာ ရှင်သန်နေထိုင်သွားပုံက တခြားလူမျိုး၊ တခြားဘာသာ ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတိုးအဆုတ် ညှိနှိုင်းမှုမရှိဘဲ တယူသန်တင်းမာနေကြဖို့နဲ့ သူတို့နဲ့ “လူမျိုး၊ ဘာသာ”မတူသူတို့ရဲ့ ပြုမူနေထိုင်ပုံနဲ့အတွေးအခေါ်အယူအဆမှန်သမျှကို လက်ခံနားလည်လိုစိတ်အလျင်းမရှိဘဲ နေသွားကြတာဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကို မေးခွန်းထုတ်နိုင်ခြင်းလည်း ခွင့်မပြု၊ ဝေဖန်ခွင့်လည်းမရှိဖြစ်နေတယ်။ မူဆလင်ဘာသာ မကိုးကွယ်သူမှန်သမျှကိုသူတို့ ဘာမဆိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိနေတယ်လို့ သူတို့ယူဆထားတယ်။ဥပမာ-မူဆလင် မကိုးကွယ်သူမှန်သမျှကို သတ်ချင်တိုင်းသတ်ခွင့်ရှိတယ်။မူဆလင်ကိုးကွယ်သူမဟုတ်တဲ့ မိန်းမတွေကိုလည်း မုဒိန်းကျင့် ချင်တိုင်း ကျင့်ခွင့်ရှိတယ်။ မူဆလင်မဟုတ်သူများအပေါ်ထားရှိတဲ့အဲဒီသဘောထားကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ် မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတွေ မုဒိန်းကျင့်ခံရမှုနှုန်း အလွန်ပင်မြင့်တက်နေပါတယ်။
Quran 4.24 “All married women are prohibited to you, except those whom your right hand possesses (a way to say”captured”) as the prisoners of war, who Allah has assigned to you.”
သူတို့သိထားတာက အစ္စလာမ်ဘာသာကို စွန့်ခဲ့သူဆို သတ်ပစ်ရန်ဖြစ်တယ်။
Al-Azhar (Cairo) Islamic Academy endorsed manual of Islamic Law, Umdat al-Salik (P.P 595-96) states: “Leaving Islam is the ugliest form of unbelief (kufr) and the worst….. Whenaperson who has reached puberty and is sane, voluntarily leaves Islam, he deserves to be killed. In such case, It is obligatory ….to ask him to repent and return to Islam. If he does it is accepted from him, but if he refuses, he is immediately killed.”
သူတို့ရဲ့ သက်ဝင်ယုံကြည်ထားမှုက သူတို့ကို မူဆလင်ဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့သူတွေနဲ့ မပေါင်းသင်းကြဖို့ တခြား ဘာသာတို့ရဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပွဲတော်တွေ၊ အခမ်းအနားပွဲတွေကို မတက်ရောက်ဖို့နဲ့ အသိအမှတ်မပြုကြဖို့ ညွှန်းကြားတယ်။
Qur’an 5:51 “O you who believe, take not the non-believers (Jews, Christians, Buddhist, Hindu, etc.) for friends. They are friends of each other. And who amongst you takes them for friends then you are indeed one of them.”
ရှေးခေတ်ကပင် “အလ္လာသခင်”ညွှန်ကြားတဲ့ ဘာသာရေးစကားတွေကိုကြားသိထားကြတယ်။ “အလ္လာသခင်”ကို ယုံကြည်လို့ သူတို့အသက်ရှင်နေကြတာဖြစ်တယ်တဲ့။ “အလ္လာ”ကို အသနားခံတောင်းပန်လို့သာရမယ်။ သူ့စကားတွေကို မေးပိုင်ခွင့်ရော၊ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ပါ မရှိစေရ”လို့ ဆိုထားတယ်။
Qur’an 8:55 “Surely the vilest of beasts in Allah’s sight area those who disbelieve.”
Qur’an 9:59 “The infidels should not think that they can get away from us. Prepare against them whatever arms and weaponry you can gather, so that you may terrorize them. They are your enemy and Allah’s enemy”.
Qur’an 9:29 “Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and his His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth.”
Qur’an 48:29 “Muhammad is the messenger of Allah. And those with him are hard (ruthless) against the disbelievers, and merciful among themselves.”
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓတရားဒေသနာကျမ်းများစွာတွင် အထက်ဖော်ပြပါ ညွှန်ကြားဟောကြားချက်များနှင့် သဘော သဏ္ဍာန်တူညီသော အချက်များ လုံးဝ မပါရှိပါဘူး။
တခြားသော ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှုများလည်း ထို့နည်းတူစွာ ဖျက်ဆီးခံကြရပုံများ
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ အလယ်ဗဟိုမှာရှိတဲ့ ကျောက်တောင်ကမ်းပါးယံကြီးပေါ်မှာ ထွင်းထုထားတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ဆင်းတု တော်ကြီးနှစ်ဆူကိုတာလီဘန်တို့ ဗုံးနဲ့ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တာကို သတိရကြသေးတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒီဆင်းတုတော်တွေဟာ ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုတွေထဲကရှေးအကျဆုံးအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတို့ရဲ့ အခြားအရပ်ဒေသတွေမှာလဲ ရှေးဟောင်း ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေ ကျောက်ကမ်းပါးယံမျာထွင်းထုထားတာတွေရဲ့ အပျက်အစီးအကြွင်းအကျန်တွေရှိခဲ့(သို့)ရှိနေဆဲပါ။ပါရှား (ယခု အီရန်)နိုင်ငံရဲ့ အထူးသဖြင့် အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာတောင် အာရပ်မူဆလင်တို့ စီးနင်းဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်မှုမတိုင်ခင်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူထု၊ ဘုရားကျောင်းတွေ၊ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတွေ၊ တရားထိုင်ကြတဲ့ ဂူတွေဟာ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဘာကြောင့် အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ ပါကစ္စတန်တို့မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ မရှိကြတာလဲဆိုတော့ အခုဆို အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ ဗုဒ္ဓရုပ်ထုအပျက်အစီးအကြွင်းအကျန်တောင် တစေ့မှမကျန်တော့ပါဘူး။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ ယခုကြွင်းကျန်နေတဲ့ရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓရုပ်ထုတော်တချို့ကို ဖျက်ဆီးနေပါပြီ။
အဲဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စီးနင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ မူဆလင်တွေဟာ အဲဒီမှာနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ကြည်ညိုလေးစားလှတဲ့ဗုဒ္ဓတရားကိုင်းရှိုင်းကြသူတွေလို့ မှတ်ယူကြတော့ မရှုစိမ့်ခဲ့ကြဘူးလေ။ မူဆလင်ကိုးကွယ်သူ တွေလည်း မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဒီတော့ဗုဒ္ဓ၀ါဒအပေါ် လုံးဝကို မလေးစားမငဲ့ကွက်ဘဲ သူတို့တတွေနဲ့အတူ တွဲနေစရာမလိုဘူးလို့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုအတင်းအဓမ္မနှင်ထုတ်ပြီးတစ်ယောက်မကျန်သတ်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ အဲဒီနောက်ရှေးဟောင်းဘာသာရေးဒေသတွေလည်း ဖျက်ဆီးခြင်းခံရပါတော့တယ်။တကယ်တော့ အဲဒီမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာ မဖြစ်တည်သေးခင် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ လောက်ကပင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဆိုတဲ့ အရပ်မှာဗုဒ္ဓ၀ါဒဟာ ရှည်ကြာစွာ နက်ရှိုင်းလှတဲ့ သမိုင်းကြောင်းနှင့်အတူ စတင်တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ပါဠိကျမ်းဂန် များအပေါ် အခြေခံပြီး ပြောရရင် ဗုဒ္ဓ၀ါဒဟာ ရှေးခေတ်ဘင်္ဂါ(Bengal or Vanga)ဒေသမှာ ဘီစီ (၃)ရာစုနှစ်မှစပြီး အေဒီ(၁၂)ရာစုအထိ ဆက်တိုက် အဆင့်အမြင့်ဆုံးကိုးကွယ်ရာဘာသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာစာသင်သားဘုန်းတော်ကြီးများဟာ အဲဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာစာပေကျမ်းဂန်တွေကို သွားရောက်ဆည်းပူးခဲ့စဉ်က အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့အထဲမှာ အဲဒီအရပ်မှာများစွာသော အလွန်ကြီးမားလှတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေ အနုစိတ်ကျောက်ဆစ်လက်ရာတွေနဲ့ အုတ်ဘုရားကျောင်းဆောင်တွေ၊ တရားကျင့်ကြံအားထုတ်ကြတဲ့ ကျောက်ဂူတွေနဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဘုန်းတော်ကြီးတွေရှိခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ထိုနေရာကို ဟိန္ဒူစစ်တပ်ကြီးများ ၀င်ရောက်သိမ်းပိုက်ပြီး အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဟာ စစ်တကောင်းဒေသမှာရှိ တဲ့တောတွေတောင်တွေထဲကို ပြေးဝင်ခိုလှုံနေခဲ့ရပါတယ်။ (ထိုစဉ်က ဟိန္ဒူတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ စိတ်ကူး စိတ်သန်း၊ပြုမူနေထိုင်ပုံတွေနဲ့ မတူကြလို့ နားလည် လက်ခံလိုစိတ် မရှိကြပါဘူး။)
ဒီ့နောက်တော့ မူဆလင်ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်သူတွေ ၀င်ရောက်လာပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေ၊ ဘုရားပုထိုးတွေကို ဖျက်ဆီးကြ၊ထောင်ပေါင်းများ စွာသော ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို သုတ်သင်သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒေသနေ လူထုကို အစ္စလာမ်ဘာသာကိုအတင်းအဓမ္မပြောင်းပြီး ကိုးကွယ်စေပြီး၊ အစ္စလာမ်ဘာသာမ၀င်သူတွေကို သတ်ပစ်ကြပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာပါပဲ။ ယခုအချိန်အခါမှာ မောင်တောနဲ့ဘူးသီးတောင်ဒေသတွေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေ၊
ဘုရားပုထိုးကျောင်းကန်တွေ အားလုံးလောက်နီးနီးဟာ ဖျက်ဆီးထားပြီးပါပြီ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘုန်းတော်ကြီးများကိုလည်း သတ်ဖြတ်ခြင်း၊မောင်းထုတ်ခြင်းတွေလုပ်ထားခဲ့ပါပြီ။
ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူထုကြီးရဲ့ဒေသကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုရှိခဲ့ရာကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မရှိသလောက်ဖြစ်အောင်ပြောင်းပစ်လိုက်ပါပြီ။ ဒါကြောင့်… အကယ်၍ရိုဟင်ဂျာတွေကိုသာ နိုင်ငံသားခံယူခွင့်ပေးလိုက်ရင်၊ ကမ္ဘာ့သမိုင်းဝင်အမွေအနှစ် နေရာဖြစ်တဲ့မြောက်ဦးမြို့ဟာ တစ်နေ့နေ့မှာ သူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုလက်အောက် ကျရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီး၊ လုံးဝအပြီးအပိုင် ဖျက်ဆီးခံရမှာသေချာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှေးအစဉ်အဆက် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း သမိုင်းကြောင်းဇစ်မြစ်ရှိခဲ့တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူထုဟာ သူုတို့ရဲ့မွေးရပ်ဇာတိမြေ၊ သူတို့ရဲ့အိမ်ယာ၊ခြံမြေနဲ့သူတို့ရဲ့ သက်သေခံအထောက်အထားတွေကို ဘာကြောင့် လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခံကြရမှာလဲ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံသားစစ်စစ်ဖြစ်လိုတာမှ မဟုတ်တာ။တကယ်နိုင်ငံသားစစ်စစ် တစ်ယောက်ဆိုတာဟာ ယောက်င်္ကျာမိန်းမမရွေး၊ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ တန်းတူရည်တူ (အဆင့်အတန်းတူ၊ရည်ရွယ်ချက်တူ) အချင်းချင်းညီအစ်ကို မောင်နှမလို သဘောထားကြပြီး အတူတကွလက်တွဲ၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုတဲ့ ဆန္ဒမျိုးလဲရှိရမယ်။တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အသိတရားဖလှယ် နိုင်ကြရမယ်။ အချင်းချင်း လေးစားမှုလည်း ရှိရမယ်။ ပြီးတော့ နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက် မိမိတို့နိုင်ငံပိုမို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရေးကို တည်ဆောက်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဆိုရင်၊ အကယ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူနည်းစုက မူဆလင်နိုင်ငံတစ်ခုထဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးဒီလိုမျိုးတောင်း ဆိုကြရင် ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲ …..ဥပမာ….တကယ်လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၅၀) လောက်က ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထဲသို့ လူအင်အားများစွာနဲ့ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်ပြီး၊ အဲဒီက မြို့ရွာတချို့ထဲက မူဆလင်ကို မောင်းထုတ်မယ်၊ သတ်ပစ်မယ်။ ပြီးတော့ လွတ်လပ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ နယ်မြေအဖြစ်တောင်းဆိုမယ် ဆိုရင်ကော ဘာဖြစ်လိမ့်မလဲ?မူဆလင်စစ်တပ်ကြီး တွေက၊ အမြန်ချီတက်လာပြီး အဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို တစ်ယောက်မကျန် အကုန်သတ်ပစ် ကြမယ်မဟုတ်လား။ဘာကြောင့်တချို့သော သတင်းထောက်တွေဟာ ရိုဟင်ဂျာဘက်ကို ခပ်ပါပါလိုက်ကြသလဲ?သတင်းထောက်အများစုဟာ စာရေးဆရာတွေသာများတယ်။ သမိုင်းသုတေသီတွေမဟုတ်ကြဘူး။ စာဖတ်သူ စိတ်ပျော့ငြိသွားစေနိုင်တဲ့ ရုန်းကန်မှုတိုက်ပွဲတွေ၊ ရာဇ၀တ်မှုတွေနဲ့ ကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကို ရှာကြဖွေကြရတယ်လေ။
တချို့သတင်းထောက်တွေက မြန်မာပြည်အကြောင်း၊ မြန်မာလူမျိုးတွေအကြောင်းသိကြပေမယ့် ဒုနဲ့ဒေးမူဆလင်ရေဦးရေ အမြောက်အများရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကို နိုင်ငံကူးဝင်လာတာတွေကိုတော့ သိကြတဲ့သူရှားလှပါတယ်။ စစ်တပ်အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ တရားမျှတမှုမရှိဘဲ ရွေးကောက်ထားတဲ့ အစိုးရတစ်ခုရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်အောက်မှာ ဘယ်အရာမှ ယုံကြည်စိတ်ချလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လဲ အခုရိုဟင်ဂျာသတင်းဇာတ်လမ်းဟာ တကယ်အစစ်အမှန်လို သတင်းမီဒီယာတွေအပေါ်ထည့်လို့ လွယ်တာပေါ့။စိတ်ထဲစူးနစ်အောင်ခံစားမှု ရသွားစေမယ့် ၀မ်းနည်းကြေကွဲစရာကောင်းလှတဲ့ သတင်းစာအရေးအသားနဲ့ ဓါတ်ပုံတွေလည်းပါတာပေါ့။ လူတော်တော်များများဟာ ဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အံ့မခန်းဝါဒဖြန့်မှုတွေ၊ သတင်းမီဒီယာကို သုံးပြီး ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လှည့်ဖြားမှုတွေ လုပ်ကြံဇာတ်ထွင်မှုတွေနဲ့ ဖြတ်ညှပ်ကပ်ဆွဲယူသုံးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ၊သတင်းလိမ်တွေကို ယုံတဲ့လူယုံနေကြတော့၊
တကယ်အဖြစ်မှန်အခြေအနေကို သိကြတဲ့၊ ရခိုင်လူမျိုးတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့လို တခြား နိုင်ငံသားတွေက တော်တော်လေးကို စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရပါတယ်။အဲဒီလိုယုံလွယ်မိတဲ့ လူတွေကမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုပဲ တော်တော်လေးသိသယောင်ယောင်နဲ့ ချက်ချင်း အရင်စလို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရခိုင်လူမျိုးတွေကို၊ လူမျိုးရေးစိတ်ပြင်းတဲ့သူတွေ ကြမ်းရမ်းတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူဆိုးတွေ စသဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ပြီးအပြစ်တင်ကြပါလေရော။ကျွန်တော်တို့လို အကြောင်းသိတဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ ရှင်းပြလိုက်ရင်သဘောပေါက်ကြတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ တည်ကြည်ခိုင်မာတဲ့ အဆင့်အတန်းဝင် လူမျိုးတွေဖြစ်တယ် သူတို့မှာ နက်ရှိုင်းတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့ သူတစ်ပါးအပေါ်သနားကြင်နာတတ်တဲ့စိတ်ရင်း စေတနာရှိတယ်။ စိတ်ရှည်တယ်၊ အတွေးအခေါ်ကြံဆပြုမှု ဆက်ဆံရေးမှာလည်း ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းရှိတယ်။ပြီးတော့ သူတို့မှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လူမျိုးရပ်တည်မှုလည်းရှိတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ဌာနေဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာရော၊ဗုဒ္ဓသာသနာ သမိုင်းမှာပါ။ (တခြားဘယ်မှာမှမရှိ) ထင်ရှားလှတဲ့ တစ်ခုတည်းသော နေရာမျိုးဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရိုဟင်ဂျာတွေက ရခိုင်လူမျိုးတွေ လုံးဝဆိပ်သုန်းသွားစေဖို့ရယ်၊ ရခိုင်သမိုင်းကို ဖျက်ဖို့ရယ်အတွက်၊ အားစိုက်ခွန်စိုက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်က ဘယ်ဒေသမှာရှိရှိသမျှသော မူဆလင်တွေကတော့ ရခိုင်လူမျိုးတွေ အကြောင်းသိနားလည်အောင်လေ့လာကြည့်ဖို့၊ခင်မင်လေးစားဖို့ ဆက်နွယ်ပူးပေါင်းဖို့ စတာတွေကိုလုပ်ဖို့ လက္ခဏာတချက်မှ ရှိမနေကြဘူး။ အဲဒီအစား၊ ကမ္ဘာအ၀ှမ်း မူဆလင်တွေက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေအပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို လူမျိုးကိုတောင် ခြိမ်းခြောက်စိန်ခေါ်ဦးမယ့် ပုံစံရှိနေပါတယ်။
ညှိနှိုင်းမှုလက်မခံတတ်သူတွေကို ညှိနှိုင်းလို့ မရနိုင်မှန်း၊ ရခိုင်လူမျိုးတွေက သိနေကြပေမယ့် သတင်းထောက်တချို့တလေက အခန်းထဲမှာအောင်းနေတဲ့ ဆင်ကြီးအကြောင်း ကိုထုတ်ဖော်ရေးချင် နေကြပါတယ် ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ယိုးဒယားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရယ်၊ ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းစုနိုင်ငံ အင်ဒိုးနီးရှားနိုင်ငံ၊ လက်ဘနွန်၊ နိုက်ဂျီးရီယားနဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံတွေမှာရှိနေတဲ့ ခရစ်ယာန်တွေရယ်၊ အီရန်နိုင်ငံမှာနေတဲ့ ( Bahai and Zoroastrians )တွေမှာ ဘာတွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာရဲ့ နောက်ကွယ်မှာရပ်တည်ပေးတဲ့ တကယ်အင်အားစုဟာ ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့”အစ္စလာမ်”တွေပဲပေါ့။ အဲဒီဖြစ်ရပ် တွေကနေ သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ဆွဲလိုက်တာကတော့ဘုရားမရှိတော့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ၊ မူဆလင်ကို မယုံကြည်တဲ့ ခရစ်ယာန်တွေနဲ့ အားလုံးသော မူဆလင်မဟုတ်သူမှန်သမျှအပေါ် ဘာသာရေးစစ်ဆင်နွှဲဖို့ အားပေးအားမြောက်လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ မြို့တွေရွာတွေမှာရောက်နေတဲ့ အဓိကရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားတွေနဲ့ သူ့အနီးကမိန်းမတွေဟာ မဖြစ်မနေခေါင်းမြှီးခြုံထားရမှာဖြစ်တယ်။ ၀တ်ရုံပုဝါကို ခေါင်းမှာ သေသေချာချာ မခြုံထားရင် (မူဆလင် မဟုတ်တဲ့ မိန်းမပင်ဖြစ်ပစေခြုံထားရမှာဖြစ်တယ်) ရိုက်နှက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသူမိန်းကလေးတွေရဲ့ မိဘတွေကိုလည်း သူတို့ရဲ့သမီးလေးတွေကို ကျောင်းမပို့ကြဖို့ ခြိမ်းချောက်ဖိအား ပေးနေကြပါတယ်။ပြီးတော့ အမျိုးသမီးတွေအပေါ် အခြားစည်းမျဉ်းတင်းကြပ်မှုတွေများစွာ လုပ်နေကြတယ်။ လူငယ်ယောက်ျားလေးတွေကိုတော့ ကျောင်းတွေမှာ ရွံမုန်းဘွယ်ကောင်းပြီး၊ တရားမမျှတတဲ့ အစ္စလာမ်စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးနဲ့ ဥပဒေကိုသင်တန်းပို့ချနေပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကိုရမ်ကျမ်းနဲ့ ဟောကြားချက်တွေအပေါ် မေးမြန်းခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း၊ မပြုလာဖို့ရယ်၊မူဆလင်မဟုတ်သူများကို တားမြစ်ဖို့ရယ်၊ နောက်ဆုံးဖြောက်ဖျက် သုတ်သင်ဖြစ်ပြီး မကြာမီ တစ်နေ့နေ့မှာ ကမ္ဘာကြီးဟာ သူတို့လို အစ္စလာမ်ဘာသာတစ်ခုတည်းသာ ရှိလာမယ် ဆိုတာတွေကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ငယ်ရွယ်တဲ့ အသက်အပိုင်းအခြားမှာ ခေါင်းထဲကို ရိုက်သွင်းပေးနေကြပါတယ်။ ကိုင်း… ဒီသတင်းမျိုးတွေ အပေါ်မှာကော ဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲ?
အားလုံးသော မူဆလင်တိုင်းဟာ သူတို့နဲ့တူတာမဟုတ်ပါ၊ အားလုံးသောမူဆလင်တိုင်းကလည်း သူတို့နည်းအတိုင်း မယုံကြည်ကြပါ။
ဟုတ်ပါတယ် အားလုံးသော မူဆလင်တိုင်းဟာ မတူညီကြပါဘူး။ မူဆလင်အားလုံးဟာလည်း အစွန်းရောက် သူတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာ ကမ္ဘာကြီးမှာရှိတဲ့ မူဆလင်တို့ရှိရာဒေသတွေဖြစ်တဲ့ ယီမင်၊ အီဂျစ်၊ တူရကီ၊ ခူဒစ်တန်၊ အယ်ဘေးနီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှားနဲ့ တရုတ်ပြည်နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ မူဆလင်တို့ နေထိုင်ရာအပိုင်းတွေမှာ အတွေ့အကြုံများရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော့်မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာအပေါ် သဘောမတူစရာတွေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကိုဆန်းစစ်ဝေဖန်ဖို့လည်း ကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူး။မူဆလင်ဆိုတာဟာ၊ ကိုးကွယ်စရာဘာသာရေးတစ်ခုကို လိုက်နာသူတွေဖြစ်တယ်။ အဲဒီ ဘာသာထဲမှာ သူ့ဘာသာတရားကိုပင် ပြန်ပြီးအနှောင့်အယှက် (ကိုယ်ရှူးကိုယ်ပတ်)ဖြစ်နေတဲ့ အချက်တွေရှိနေတယ။် ဒီတော့ အဲဒီအချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီး လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်အချက်တွေကိုတော့ လိုက်နာရမယ်။ ဘယ်အချက်တွေကိုမလိုက်နာနိုင်ဘူးဆိုတာရှိရပါမယ်။မူဆလင်အများစုဟာ လူကို သေသည်အထိ ကျောက်ခဲနဲ့ ပေါက်သတ်တာတို့၊ ခေါင်းဖြတ်သတ်တာကို လုပ်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာအစိတ်အပိုင်း အချို့နေရာတွေမှာတော့ မူဆလင်တချို့ဟာ ဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုးကို အဓိကထားပြီး လုပ်နေကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့ အခြေအနေမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို မသိကျိုးကျွံ လစ်လျူရှုထားလို. မရပါဘူး။
အပိုင်း(၄) သို့ 
By Rick Heizman, San Francisco, California, U.S.A
← အနော်ရထာ မတိုင်မီခေတ် မြန်မာ့သမိုင်းအတွက် ကိုးကားစရာ စာတမ်း
ကုလားတွေကို ဘယ်သူတွေ မြန်မာနိုင်ငံထဲ သွင်းခဲ့သလဲ →